Gadzira brand vatsigiri neZuberance | MarTech Blog
Zuberance, inhau yemagariro enhau, inoti inopa mhinduro:
Zuberance inoshanda padhatabhesi rezita racho nekutumira maturusi ekuteerera munharaunda nekupa ongororo nekukurumidza, kuti vaone kuti ndeupi wevatengi vangangodaro vanotsigira maratidziro, uye vachida kutsigira chiratidzo panzvimbo yemagariro. Izvo zvinobva zvapa vatengi ava neane mana maapplication: Gweta Rekuongorora, Gweta Uchapupu, Gweta Mhinduro, uye Gweta Zvipo, izvo zvinovatendera kuti vatumire kurudziro pane chero angangoita enhau enhau anowanikwa.
Mhando dzinobatsirwa munzira dzakawanda kupfuura kungoonekwa chete. Semuenzaniso, mutengi anoshandisa Advocate Offer app kugovana ruzivo rwechigadzirwa chinopihwa neshamwari dzinoshandura shamwari seidzo dzinotungamira kune mushambadzi. Saizvozvowo, mutengi ane Gweta Rekupindura App anopindura chigadzirwa chigadzirwa zvichibva pane zvaakaona, izvo zvinoita kuti mutengi ave anotarisira pane mumiriri wekambani anopa mhinduro imwechete.
Zuberance Advocate Analytics zvino inoteedzera mhedzisiro mu-chaiyo-nguva yekutsvaga iyo inomiririra chimiro nehuwandu hwevanhu uye chiitiko, uye inopa iyo brand neruzivo rwekuongorora mune yakapusa kunzwisisa dashibhodhi. Zuberance ine akati wandei vatengi zvipupuriro pane yavo saiti iwe yaunogona kutarisa kana iwe uchida kuona kuti chikuva chiri kushandiswa sei mune yako indasitiri.
Zuberance inopa izvi maapplication zvakazvimiririra, kana kuvapa ivo sechikamu cheyakazara turnkey mhinduro inosanganisira zvese zvinoitwa nemuchina wekutsigira mushandirapamwe. Kubudirira kweZuberance kana chero chishandiso chinobvumidza mabhizinesi kushandura vatengi seBrand Advocates kunoenderana nekuve nevatengi vanogona varipo pakutanga. Kune izvi, hapana pfupiso kune chigadzirwa kana sevhisi kugona uye mushe mushe webasa.
Tags: kukurudziratsigira chikumbirobrand brand kukurudziramumiriri wezitakasitoma kunzwisisamukadziizwi remuromo
Yext: Imwe Nzvimbo Sevhisi yekutonga Ivo Vese
Badgeville: Inokurudzira Maitiro Ekuchinja kuburikidza neGamification